केर्दोबामा के हेर्ने - char मनमोहक ठाउँहरू जुन तपाईंले अवश्य भेट्नु पर्छ Absolut यात्रा
यदि हामी अन्डालुसियाको बारेमा सोच्दछौं भने हामीलाई थाहा छ कि हामीसँग धेरै शहरहरू र ती कुनामा भेट्न जान्छौं। तर आज, हामी उनीहरु मध्ये एक रोक्नेछौं जो सियरा मुरैनाको खुट्टामा छ। कर्डोबा अन्डालुसियामा अधिक बासिन्दाहरू भएको तेस्रो शहर हो। यसमा तपाईं अन्य समय बाट एक महान विरासत पाउन सक्नुहुन्छ। आज हामी तपाईंलाई बताउँछौं कर्डोबामा के हेर्ने र यसको essential आवश्यक कुनाहरू।
हामीले राम्ररी उल्लेख गर्यौं, यो शहर र धेरै समयको साथ जान्न सकिन्छ। प्रत्येक चोटि जब हामी यसलाई प्रवेश गर्छौं, यसले हामीलाई एक अद्वितीय इतिहास र रचनात्मकताको पूर्ण अतीतबाट लिनेछ। जहाँ महान दार्शनिकहरु र कविहरु को जन्म भएको थियो समयको। आज हाम्रो महान यात्रा पत्ता लगाउनुहोस्!
1 कर्डोबा, मस्जिदमा के हेर्ने
3 रोमन ब्रिज
4 Cordovan आंगन
5 क्यालिफाल बाथहरू
6 Tendillas वर्ग
7 लालटेन्सको क्राइष्ट
कर्डोबा, मस्जिदमा के हेर्ने
कुनै श doubt्का बिना, पहिलो स्टप को एक हो कोर्डोबा मस्जिद। १ 1984। 1000 पछि विश्व विरासत साइट र हामी एक सबै भन्दा महत्वपूर्ण स्मारकको सामना गरिरहेका छौं। यसको इम्प्रेसिंग सुन्दरताका साथै जुन १००० भन्दा बढी स्तम्भहरू मिलेर बनेको छ, एकले यसको ऐतिहासिक मूल्यमा पनि फर्किनु पर्छ। Construction 785 मा निर्माण सुरु भयो।
यद्यपि पछि यो धेरै अवसरहरूमा विस्तार गरिएको थियो। यस तरीकाले यो संसारमा दोस्रो ठूलो भयो। यी सबै कारणहरूको लागि, यो एक अनिवार्य भ्रमणहरूमध्ये एक हो जुन एक पटक शहरमा हुनुपर्दछ। बिहान :8:०० बिहान :00: .० देखि छुट्टीहरू वा आइतवारहरू बाहेक, तपाईंसँग नि: शुल्क पहुँच छ। सायद तपाईसँग धेरै हेर्नको लागि समय छैन, तर यसको एक अंश। प्रवेश द्वार, बाँकी दिन र घण्टा १० युरो वयस्कहरूको लागि र पाँच बच्चाहरूको लागि हो।
गढी र महल जो कि भित्ता भित्र मिल्दछ। यहाँ दुबै रोमन र भिसिगोथ एकसाथ रहन्छन्, तर अरब मूलका ब्रश स्ट्रोकहरू पनि छन्। जब फर्नांडो III एल सान्तोले कोर्डोबा कब्जा गर्थे, भवन भग्नावशेषमा थियो। यो Alfonso X El Sabio नभएसम्म हुनेछ जुन यसको पुनर्स्थापनाका साथ शुरू हुन्छ। को क्रिश्चियन मोनार्क्सको अल्काजार यसका धेरै प्रयोगहरू छन्। ती मध्ये एउटा १ th औं शताब्दीको जेल हो।
कुनै श doubt्का बिना, यो रमाईलो गर्ने क्षेत्र हो। तपाईं चार टावरहरू द्वारा मोहित हुनेछन् जसले यस किल्लाको अध्यक्षता गर्दछ। तिनीहरू तपाईंलाई प्रकृतिले भरिएका आँगनहरूमा स्वागत गर्नेछन्, जुन हामीलाई लिएर जान्छन् कोरिडोरहरू र विभिन्न कोठाहरू जहाँ हामी पत्थरले बनेका गोथिक डोम्बहरू देख्न सक्छौं। यो सोमबार बन्द छ, तर बाँकी दिनहरू तपाईं यसलाई बिहान सबेरैदेखि :15:०० बिहानसम्म हेर्न सक्नुहुनेछ। वयस्कहरूले 00० युरो भुक्तानी गर्नेछन्।
सब भन्दा धेरै भ्रमण गर्ने स्थानहरू मध्ये अर्को कोर्डोबाको रोमन ब्रिज हो। यदि तपाईं कर्डोबामा के हेर्ने भनेर सोच्दै हुनुहुन्थ्यो भने, तपाईंलाई पहिले नै थाहा छ कि यो सिफारिश स्टपहरू भन्दा बढि अर्को हो। यो गुवादाल्विभिर नदीमा पूल अवस्थित छ। यसलाई «पुरानो ब्रिज as को रूपमा चिनिन्छहुनसक्छ धेरै शताब्दियौंदेखि यो शहरमा यो एक मात्र थियो। यो शहरको ऐतिहासिक केन्द्रको अंश हो र २०० 2008 मा पुन: निर्माण गरियो।
यद्यपि यदि हामी यसको निर्माणमा फर्कन्छौं भने हामीले एसआई डीसीको बारेमा कुरा गर्नुपर्दछ यसमा जम्मा 331 16१ मिटर र १ XNUMX आर्चहरू छन्। यद्यपि यो भनिन्छ कि यसको मूल रूप मा, यो एक अर्को हुनेछ। जिज्ञासाको रूपमा हामी यो भन्न सक्छौं २०१ in मा गेम अफ थ्रोन्सबाट केहि दृश्यहरू यस पुलमा रेकर्ड गरिएका थिए। यो भने श्रृंखलाको पाँचौं सत्रमा देख्न सकिन्छ।
पर्यटकहरूका लागि कर्डोभान पाटिओस विशेष चासोको विषय हो। अवश्य पनि, यो कमको लागि होइन। यस जस्तो शहर जिउँदो आउँदछ धन्यवाद बर्तनहरूका लागि भाँडाहरू जुन पाटिओसमा राखिन्छ। त्यसैले मेको दोस्रो र तेस्रो हप्तामा, कल मनाईन्छ Cordovan Patios महोत्सव.
यसमा त्यहाँ धेरै सहभागीहरू छन् जसले नि: शुल्क तिनीहरूको सुन्दर आँगनहरू प्रदर्शन गर्दछन्। अवश्य पनि, यदि तपाईं मेमा जान सक्नुहुन्न भने, तपाईंले यस सुन्दरताको आनन्द लिनु हुँदैन। त्यसोभए तपाईं पलासिओ डे भियाना जान सक्नुहुन्छ र मजा लिन सक्नुहुन्छ, किनकि यसमा १२ आँगनहरू र ठूलो बगैचा छ। अवश्य पनि, यो स्थान सोमबार बन्द छ भनेर सम्झनुहोस्।
१ 1903 ०। मा, यी खलिफा स्नानहरू संयोगले फेला पर्‍यो। तिनीहरू उमैयाद अल्काजारसँग जोडिएका थिए कि हरायो। यो सोच्दछ कि तिनीहरू पूरै शहरमा सब भन्दा महत्त्वपूर्ण स्नानहरू हुन् र निस्सन्देह, यो अर्कै मनमोहक कुनामा हो जब हामी आफैलाई सोध्छौं कि कर्डोबामा के हेर्ने हो। तिनीहरू Alhakén II को खलीफा अन्तर्गत आयोजित थिए.
भित्र, हामी धेरै कोठाहरू फेला पार्दछौं र ती सबै राम्ररी बन्द छन् र भोल्टसँगै छन्। तिनीहरू कर्डोबाको ऐतिहासिक केन्द्र पनि हुन् र २०० 2006 देखि तिनीहरू सर्वसाधारणको लागि खोलिएका थिए। यदि तपाईं यो स्थानको भ्रमण गर्नुहुन्छ भने, तपाईंले २.2.50० यूरो भुक्तानी गर्नुपर्नेछ र तपाईं स्वागत क्षेत्र, साथै बैठक कोठा वा बगैंचामा जानुहुनेछ।
नुहाउने ठाउँ, संग्रहालयहरू, अल्काजार वा मस्जिदको बीचमा, यो बिभिन्न स्टप गर्न पनि राम्रो हुन्छ। यो बारे मा छ Tendillas वर्ग। यो पुरानो रोमन फोरमको धेरै नजिक छ र कर्डोबामा वाणिज्यको मुख्य पोइन्ट हो। लगभग तथाकथित Calle Gondomar संग मिलन मा, हामी फेला पार्नुहुनेछ वर्ग मा घडी। यससँग विस्तृत जानकारी छ कि यसले वास्तवमै झिंगल हडताल गर्दैन, बरु घन्टाको साथसाथै क्वार्टरले गितारको गीत गाउँदछ।
तपाईं कम वा कम धार्मिक हुनुहुन्छ भन्नेले खास फरक पार्दैन, किनकि यस कुनामा तपाईं प्रेममा पर्नुहुनेछ। मूर्तिकार जुआन नवारो लियोनले १ 1794 XNUMX in मा यसको निर्माण गरे। यो स्थित छ क्यापुचिन स्क्वायर। कुनै श doubt्का बिना, अर्को स्थान जुन रातमा रमाइलो गर्न उत्तम छ। त्यसकारण जब उनको वरिपरि आठ लालटेनहरू प्रकाश हुन्छन्। एन्टोनियो मोलिना द्वारा गरिएको एउटा शामेल सहित यो स्थानले केहि कविताहरुलाई बृद्धि गरेको छ।
जब हामी आफैलाई सोध्छौं कि कर्डोबामा के हेर्ने हो भने, त्यहाँ अन्य कुनाहरू र स्थानहरू हुन्छन् जुन आवश्यक भन्दा बढी छन्। यद्यपि हामी यी बाँकी छ भन्ने कुरामा कुनै श doubt्का बिना, ती पनि धेरै हुन्। के तपाईंले पहिल्यै तिनीहरूलाई भ्रमण गर्नुभयो?
लेखको पूर्ण मार्ग: Absolut यात्रा » कर्डोबामा के हेर्ने